Chii chaungaona muCala Llombard, Mallorca | Kufamba Nhau
La Cala Llombards beach iri muMallorca, munzvimbo yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva, makiromita mashoma kubva kuSantanyí uye mukati memunharaunda iyi. Kana isu tichigona kuona chimwe chinhu muMallorca, ndiyo chaiyo nhamba hombe yemakesi ayo anayo, ayo anowanzo kuve madiki asi achifadza. Kutora nzendo dzemakungwa akanakisa ndiko kunofanirwa patinoshanyira chitsuwa ichi.
In the chitsuwa cheMallorca tine zvinhu zvakawanda zvekuita asi imwe yeanonyanya kufarirwa pasina mubvunzo inosanganisira kushanyira mahombekombe ayo akanakisa uye mavhavha, ayo ane rakasarudzika reMediterranean. Idzi nzvimbo, senge Cala Llombards, dzine turquoise mvura uye dzinotipa isu maParadhiso madiki ekuti tishandire zuva racho.
1 Izvo zvaunofanira kuziva nezve Cala Llombard
2 Chii chaunofarira muCala Llombard
3 Zvaunofanira kuona padyo neCala Llombard
3.2 Mondragó paki yepanyama
3.3 Makorokoza epedyo
Izvo zvaunofanira kuziva nezve Cala Llombard
MuMallorca mune mijenya yemakungwa akanaka ayo anofanirwa kushanyira uye Cala Llombard ndomumwe wavo. Cove iyi ine mamwe maitiro. Inopa nzvimbo yakapaka yekupaka uye padyo nenzvimbo ine jecha. Ndosaka chiri chichivha icho mhuri zhinji dzinosarudza kunakirwa nezuva rine zuva. Kupakira mahara uye kwakaringana, kunyangwe pasina chekufambisa cheveruzhinji chekusvika kunzvimbo iyi, saka tichafanirwa kuroja mota kana tiri kuona nzvimbo uye tichida kuiona. Inogara zvakaringana panguva yezhizha, saka kana tichida kuwana nzvimbo yakanaka isu tichafanirwa kuenda mangwanani. Cove iyi zvakare ine nzvimbo yakachengetedzwa nematombo, zvinoita kuti mvura dzayo dzigadzikane zvakanyanya, chimwe hunhu icho chakanakira mhuri dzine vana vadiki.
Kana ari masevhisi atinogona kuwana mune ino cove, akasiyana. Zviri zvinogoneka kubvarura amburera uye sunbeds kunyaradza kwepamusoro. Nekudaro, harisi gungwa kwavakaisa masevhisi akawandisa, vachidzivirira kuvaka zvimwe zvivakwa sezvo iri nzvimbo yakanaka yechisikigo. Iwe unogona kuona dzimba dzevamwe varedzi uye kune diki bhawa bhawa kwaunogona kutenga zvimwe zvinhu. Asi hapana masevhisi emitambo yemvura, kunyange ichiri diki diki kune ichi chinhu chechinhu.
Chii chaunofarira muCala Llombard
Iyi diki cove inzvimbo inozivikanwa kwazvo kune vashanyi saka tinoziva kuti kuchave nevanhu vazhinji. Nekudaro, igungwa kwete yakafara kwazvo inotambanudza kumashure, takanangana nenzvimbo yesango repine apo patinogona kuwana mumvuri. Iyo inzvimbo yakanaka yekupedza zuva nekuti ine nzvimbo dzine mumvuri nekuda kwesango repine, patinogona kuva nepikiniki inonakidza. Uye zvakare, iyo yakakomberedzwa nenzvimbo dzine matombo kubva kune vamwe vanhu vakashinga vanosarudza kusvetukira mumvura. Iyi pfungwa inokodzera chete kune vane ushingi asi inonakidza kwazvo uye tichaona vanhu vachizviita gore rese. Kune rimwe divi, inzvimbo isina kudzika ine turquoise uye mvura yekristaro, semamwe makoji eMallorca, ayo anotibvumidza kudzidzira mitambo yakadai seyorkeling.
Zvaunofanira kuona padyo neCala Llombard
Kana tichizoswera mune izvi Cove isu tichafanirwawo kuona zvakapoteredzwa. Kana tikapedza mazuva akati wandei kumaodzanyemba kweMallorca tinogona kuona zvimwe zvinhu zvinonakidza. Kubva kumadhorobha kusvika kumamwe makovha atinofarira kushandisa zuva rakanaka kumahombekombe.
Guta diki iri iri makiromita gumi chete kubva kuCala Llombard, kuchiita nzvimbo yakanaka yekugara. Iri guta rine guta rakanaka rekare rine rusvingo rwakakomberedzwa uye mukana unonzi Porta Murdada. Pakati peMugovera pane musika mukuru kwaunogona kutenga mhando dzese dzezvinhu. Mutaundi mune zvekare zvekare maresitorendi kuyedza iyo inonaka gastronomy.
Mondragó paki yepanyama
Kumwe kushanya kwakakosha mu nzvimbo inosanganisira kuona iyo Mondragó Natural Park. Iyi inzvimbo yakachengetedzwa yechisikigo inopa mafambiro ekuona maruva nemhuka dzenharaunda. Munzvimbo ino kune rimwezve remakona akakosha muMallorca yese, Cala Mondragó. Ichi chihombe chakafara uye chinopa kristaro yakajeka mvura. Kana isu tichida kuita chero chiitiko, tinogona kunakidzwa nenzira dzakadai sePunta de Ses Gavotes kana iyo Mirador de Ses Fonts de N'alis. Iyi nzira dzakanakira mhuri uye dzinogona kuitwa netsoka kana bhasikoro. Ino inzvimbo yakanaka yemusikirwo muMallorca padhuze neCala Llombards.
Imwe yei Makovha anozivikanwa kwazvo kuwedzera kune izvo zvataurwa kare ndeyeCala d'es Moro, iyo inosvika nekufamba munzira diki kubva kupaka. Icho chinhu chakakosha pakati pematombo. Imwe yemakovha ayo anogona kunakidzwa ndeye Cala S'Almonia, nzvimbo ine mawere, mimvuri nekuda kwenzvimbo yemipaini miti uye nemvura yakachena. Iro zvakare igungwa rakakura uko vashanyi vashoma vanoenda saka zvakafanira kuona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Cala Llombards muMallorca